December 2020 – " कञ्चनजंगा News "
सुत्नु अघि पाथिभरा माताको दर्शनगरी माताले हामी सबैको कल्याण गरुन्, पुष १७ गते शुक्रवारको राशिफल हेर्नुहोस्
No Comments on सुत्नु अघि पाथिभरा माताको दर्शनगरी माताले हामी सबैको कल्याण गरुन्, पुष १७ गते शुक्रवारको राशिफल हेर्नुहोस्
No Comments on पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट साढे एक अर्ब बचत
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले गत वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट रु साढे एक अर्ब बचत गरेको छ ।
निगमले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार २०७६ भदौदेखि २०७७ असारसम्मको १० महिनामा ढुवानीबापतको रु एक अर्ब ४७ करोड बचत भएको हो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार प्रति महिना पाइपलाइनमार्फत इन्धन ढुवानी हुँदा रु १४ करोड ७० लाख बचत हुँदै आएको छ । गत वर्षको भदौ २४ गतेबाट मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको थियो ।
लामो समयदेखि घाटामा रहेको निगम आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि ९पाँच वर्ष यता० नाफामा सञ्चालन भइरहेको छ । निगमले आव २०७२/०७३ मा रु १९ अर्ब ३६ करोड, आव २०७३/०७४ मा रु नौ अर्ब ४५ करोड, २०७४/०७५ मा रु तीन अर्ब ५८ करोड, २०७५/०७६ मा आठ अर्ब ७५ करोड र गत आव २०७६/०७७ मा रु १२ अर्ब ८७ करोड नाफा कमाएको छ ।
निगमले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु २९ करोड रहेको चुक्ता पूँजीलाई रु दश अर्ब पूँजी वृद्धि गरेर रु एघार अर्ब पुर्याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निगमले नाफा रकमबाट २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नाफा रकमबाट शेयर होल्डरलाई २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ । रासस
किन गइरहन्छ झ्याप्प-झ्याप्प बिजुली ? विधुत प्राधिकरणले दियो ३ बुँदे प्रस्टीकरण
No Comments on किन गइरहन्छ झ्याप्प-झ्याप्प बिजुली ? विधुत प्राधिकरणले दियो ३ बुँदे प्रस्टीकरण
काठमाडौं । लोडसेडिङ अन्त्य भएको लामो समय भए पनि राजधानीमा पछिल्ला दिनमा लोडसेडिङको झल्को दिँदै झ्याप्प-झ्याप्प बिजुली गइरहने समस्याले सबैलाई सताएको छ। तिन बर्षअघी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकै कार्यकालमा नेपालमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो ।
तिन बर्षपछि झ्याप्प-झ्याप्प बिजुली आउने जाने गर्नाले जनताहरु फेरी लोडसेडिङ सूरु भएको हो की भनेर चिन्तित भएका छन्। बिजु्ली आउने जाने समस्याले किन यस्तो अवस्थाको सिर्जना भयो होला भनेर आम मानिसले चासो व्यक्त गरिरहेका छन् । कतिपय मानिसहरुले सामाजिक सञ्जालमा खुलेरै आलोचना गरिरहेका छन्।
यो विषय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विहिबार विज्ञीप्ती जारी गर्दै विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका अघोषीत लोडसेडिङ सूरु भएको तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्ने समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
‘नेविप्राले विगत ३ बर्षअघिदेखि नै लोडसेडिङ अन्त्य गरिसकेको, फेरी लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नआएको र देहायको अवस्थामा छोटो समयलाई विद्युत आपूर्तीमा अवरोध हुन गएको ब्यहोरा आम विद्युत उपभोक्ता, मिडियाकर्मी, पत्रकार र संबन्धीत सबैमा अनुरोध गरिएको छ।’ विज्ञीप्तीमा उल्लेख गरिएको छ।
जाडो बढेसँगै सबैको घरमा विद्युत खपत् पनि बढेको छ । लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन मिलाएर बिजुली वितरण गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनियमित तरिकाले विद्युत् कटौतीले जनताहरुलाई समस्या भएकोमा प्राधिकरणले क्षमा समेत मागेको छ।
माग बढ्दा केही स्थानमा स्वभाविकरूपमा लोड बढेको र लोड व्यवस्थापनमा केही समस्या आउँदा विद्युत् काटिने गरेको प्राधिकरण जनाएको छ । सोही समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले काठमाडौँका प्रमुख सवस्टेशन र वितरण केन्द्रहरुमा प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरी मर्मत गरिसकेको छ ।
अध्ययनले देखायो साङ्लाको दुधमा हुन्छ गाई–भैंसीको भन्दा बढी पौष्टिक तत्व
No Comments on अध्ययनले देखायो साङ्लाको दुधमा हुन्छ गाई–भैंसीको भन्दा बढी पौष्टिक तत्व
एजेन्सी – गाई, भैँसी, बाख्रा लगायतका स्तनधारी जनावरले मात्र होइन साङ्लाको पनि दुध दिन्छ ।
यस विषयमा अनुसन्धान गरेका भारतका वैज्ञानिक सुब्रमण्यम रामाश्वमईले दूध दिने साङ्ला प्रजातिको नाम डिप्लोप्टेरा पंक्टाटा अर्थात् प्यासिफिक बिटल कक्रोच हो।
यो साङ्लाका बच्चा धेरै समयसम्म बाँच्छन् र स्वस्थ पनि हुन्छन् । त्यसको मुख्य कारण साङ्लाको दूध नै हो । अध्ययनको क्रममा गाईको दूधमा भन्दा यो प्रजातिको साङ्लाको दूधमा चार गुणा बढी पौष्टिक तत्व पाइएको थियो ।
अण्डा नपार्ने यो साङ्लाले बच्चा जन्माउने गर्छ । यो साङ्लाको दूधमा अन्य जनावरको दूधको तुलनामा निकै धेरै पौष्टिक तत्व हुन्छ । विभिन्न देशका मानिसहरुले साङ्ला खाने गर्दछन् ।
यो पनि -कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार अमेरिकामा पनि पुष्टि
काठमाण्डौ – तीव्र गतिमा फैलिन सक्ने भनिएको कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार अमेरिकामा पनि पुष्टि भएको छ ।
नयाँ किसिमको भाइरस एकदमै छिटो फैलिने भए पनि त्यसमा पुरानो भाइरसमा भएजस्तै गुणहरू भएको पब्लिक हेल्थ इङ्ल्याण्डले गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । नयाँ प्रकारको कोरोना संक्रमण भएका १ हजार ७ सय मानिसमा अध्ययन गर्दा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसले पुरानोको जत्तिनै असर गर्ने देखिएको नयाँ प्रकारका भाइरसको अनुसन्धानमा खटिएका वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् ।
अहिले, विकसित गरिएका खोपहरु नयाँ प्रकारको भाइरस विरुद्ध पनि प्रभावकारी हुने अनुसन्धानकर्ताहरुले जनाएका छन् । बेलायतमा पहिलाे पटक देखिएकाे नयाँ भाइरस अन्य देशमा पनि देखिन थालेपछि विभिन्न देशले उच्च सतर्कता र लकडाउनसमेत गरेका छन् ।
हामी किन रोगी भयौ ? अब अर्ग्यानिक जीवनशैली अपनाउने कि ?
No Comments on हामी किन रोगी भयौ ? अब अर्ग्यानिक जीवनशैली अपनाउने कि ?
अहिले देशमा सबैभन्दा बढी प्रगति के कुरामा भएको होला ? अरु कुरा छाडौं । धमाधम अस्पताल बनिरहेका छन् । नयाँ नयाँ मेडिकल इक्विपमेन्ट भित्रिइरहेका छन् । तपाईं/हाम्रा छोराछोरी चिकित्सा शिक्षा आर्जन गरिरहेका छन् । हामीलाई लाग्छ, यो खुसीको कुरा हो ।
तर, अस्पताल बनाउनै नपर्ने, मेडिकल इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्नै नपर्ने, डाक्टर बन्नै नपर्ने अवस्था भइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो ? भलै, यी स्वैरकाल्पनिक कुरा जस्तो मात्र लाग्न सक्छ । तर, हाम्रा पूर्खाहरुले कहाँ अस्पताल खोजे ? कहाँ उपचार गराए ?
उनीहरु अग्र्यानिक युगमा हुर्किए । आफ्नै बलबुतोमा पेट भेर । शारीरिक श्रम गरे । साँझ-बिहान पसिना चुहाए । त्यही कारण उनीहरु निरोगी भए । जवान भए ।
किन भरिदैछ अस्पतालको शैया ?
अहिले हामी रोगी छौं, त्यही भएर अस्पतालको संख्या बढ्दो छ । हामी जति-जति रोगी हुँदैछौं, उत्तिनै अस्पतालको शैया भरिदैछ । कतिसम्म अवस्था छ भने, अहिले अस्पतालमा रोगीको खचाखच भिड छ । रोगीको संख्या बढेकाले उपचार विधी अहिले सेवाभन्दा बढी व्यापार भएको छ । रोगको मोलमोलाई गर्नेहरु बढेको बढेकै छ । अस्पतालमा पुग्नसाथ तपाईं/हामीले अन्धधुन्ध पैसा खर्च गर्नुपर्ने बा’ध्यता छ ।
हामी किन रोगी भयौ ?
हामी रोगी हुनुमा अहिलेको पर्यावरण, खानपान धेरै कारण छन् । र, मूख्य कारण त हामी स्वयम् हौ । किनभने हामीलाई अहिले सुविधा चाहिएको छ । आरम चाहिएको छ । एक पाइला हिँड्न पनि जाँगर चल्दैन ।
एकातिर हामी सुविधाभोगी हुँदैछौं । अर्कोतिर स्वादमा लोभी भएका छौं । हामीलाई आरम चाहिन्छ । हामीलाई मिठोमसिनो चाहिन्छ । यस किसिमको जीवनशैलीले पनि हामीलाई रोगी बनाउँदै लगेको छ । हाम्रो शरीर रोगहरुको भण्डार बनाउँदै लगेको छ ।
अहिले कुनै अस्पताल पुग्नुपर्छ, वि’रक्तलाग्दो दृश्य देखिन्छ । कोही ऐया-अत्था गरिरहेका छन्, कोही निरासाले गुम्सिएका छन्, कोही अत्यासले छटपटिएका छन् । अस्पताल पुगेपछि हाम्रो हातगोडा गल्छ । मन बेचैनी र निरासाले भरिन्छ । हामी मनमनै पुकार गर्छौं, ‘भगवान् ! अस्पतालमा पाइला टेक्न नपरोस् ।’
त्यही अस्पतालबाट चार पाइला अगाडि बढेपछि हाम्रो मन बहलिन्छ । हामीलाई रेष्टुरेन्टमा पाक्दै गरेको मम, चाउमिन खान मनलाग्छ । चुरोट सल्काउन मन लाग्छ । म’दिरा सेवन गर्न मन लाग्छ । हामी मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौ । मनको आदेशमा आफ्नो इन्दि्रय चलाउँछौं । हाम्रो शरीरले थेग्दैन । एकातिर व्यायाम गरिदैन, अर्कोतिर स्वस्थ्य खानपान गरिदैन । शरीरले कहिलेसम्म थेग्ने ?
हामीले खाएको खाना राम्ररी पच्दैन । पाचन यन्त्रलाई त्यो बोझिलो बन्छ । शरीरमा बोसो जम्छ । बोसोले भित्री अं’गको कार्यसंचालनमा अ’वरोध पुर्‍याउँछ । नसामा, कलेजोमा, मुटुमा बोसोको असर पर्न थाल्छ । मुटुले राम्ररी रगत पम्प गर्न सक्दैन । हामीलाई कमजोरी अनुभव हुनथाल्छ । चक्कर लागेको भान हुन्छ । औडाह वा बेचैनी हुन थाल्छ । हामी नजिकैको अस्पतालमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्छौं । परीक्षणले उच्च रक्तचाप बढेको देखाउँछ । मधुमेहले गाँजेको देखाउँछ । कोलोस्टोरले सताएको देखाउँछ । थाइराइडले समातेको देखाउँछ । हामी घर र्फकदा हाम्रो हातमा औषधीको पोको पन्तुरो हुन्छ ।
रोग लागेपछि जीवनशैली परिवर्तन ?
यो अवस्था आइसकेपछि बल्ल हामी चुरोट र मदिरा कम गर्छौं । चिल्लो, चाप्लो खाना छाड्छौं । जंकफूड नियन्त्रण गर्छौं । मौका परे बिहान बेलुकी दौडन निस्कन्छौं । हल्काफुल्का ज्यान तन्काउँछौं । तर, रोग लागिसकेपछिको अवस्थामा त्यसबाट मुक्ती पाउन निकै ठूलो कसरत गर्नुपर्छ ।
रोग लाग्नुअघि नै संभावित समस्यालाई बुझ्ने । भोलिका दिनमा मेरो शरीर रोगी होलान् । थला परिएला । औषधीको भरमा बाँच्नुपर्ला । अस्पताल धाइरहनुपर्ला । यो कुरा आज नै सोच्नुपर्छ । अतः भोलिका संभावित कठिनाइबाट बच्न आज नै स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाउनुपर्छ ।
अहिले हामीलाई जे जति रोग लागेका छन्, अधिकांश रोग खराब जीवनशैलीको कारण लाग्ने गरेको छ । केही वंशानुगत र केही सरुवा रोग हुन सक्छ । तर, यस्ता रोगहरुबाट मुक्ति पाउनका लागि पनि शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनुपर्छ । शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने काइदा भनेको स्वास्थ्य जीवनशैली नै हो ।
सुपाच्य खान, सक्रिय दैनिकी र सकारात्मक मन
स्वास्थ्य जीवनशैलीमा सन्तुलित र सुपाच्य खानेकुरा, नियमित र सक्रिय दैनिकी, सकारात्मक र उत्साहित मानसिकता आवश्यक्ता हुन्छ । यसलाई हाम्रा पूर्खाहरुले उचित आहार, उचित विहार र उचित विचार भनेर व्याख्या गरेका छन् ।
स्वास्थ्य जीवनशैलीका लागि हामीसँग त्यही किसिमको आधार पनि चाहिन्छ । हामीले धेरैजसो त खानेकुराको माध्यामबाट रोग पैदा गर्छौं । हाम्रो शरीरमा खानेकुराकै माध्याबाट रोग प्रवेश गर्छ र खानेकुराकै माध्यामबाट रोग हुर्कन्छ ।
अहिले तपाईंलाई यस्तो काम गर्ने जाँगर छैन, फुर्सद छैन, रुची छैन । त्यसो हो भने, भोलि तपाईंले अस्पतालमा बसेर यो भन्दा बढी समय गुजार्नुपर्नेछ ।
जबकी खानेकुरा भनेको शरीरका लागि औषधी हुनुपर्ने, वि’ष होइन । खानेकुराले स्थुल शरीर निर्माण गर्नुपर्ने हो । हड्डी तथा मांशपेसीलाईर् बलियो र तन्दुरुस्त बनाउनुपर्ने हो । शरीरका भित्री अंगहरुको कार्यसंचालनलाई चुस्त बनाउनुपर्ने हो । तर, अहिले हामीले जे खाइरहेका छौं, त्यसले शरीरमा वि’ष पैदा गरिरहेको छ । यहि कारण त अहिले शरीरको शुद्धिकरण गर्ने विधीहरु लोकपि्रय हुँदैछ ।
शरीर शुद्धिकरण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता त्यही कारण पैदा भएको छ कि, हाम्रो शरीर विषाक्त हुँदैछ । शरीरभित्र विष भण्डार बढ्दैछ ।
शरीरलाई वि’ष भण्डार बन्न नदिने कि ?
शरीरलाई शुद्धिकरण गरेर स्वास्थ्य जीवनयापन गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ । त्यो भन्दा पनि राम्रो त के भने, शरीरलाई वि’ष भण्डार बन्नै नदिने । यसका लागि हामीले यस्तो खानपान गर्नुपर्छ, जो अग्र्यानिक होस् । प्राकृतिक होस् । जसले शरीरभित्र कुनै वि’कार पैदा नगरोस् ।
हो, यसका लागि अब हाम्रो भान्सा अग्र्यानिक हुन जरुरी छ । भान्सा अग्र्यानिक हुनका लागि हाम्रो खेती वा करेसाबारी अग्र्यानिक हुनुपर्छ । हामी बजारमा आश्रति भइरह्यौं भने वि’षालु खानेकुरा हाम्रो भान्सामा भित्रिने क्रम रोकिदैन । त्यसैले जे जति उपलब्ध छ, आफ्नै खेतीपाती गरौं । अग्र्यानिक खेतीबालीबाट आवश्यक अन्न, सागपात खरिद गरौं । सस्तो र सजिलोको लागि बजारमा आएजति सबै किसिमको खानेकुरा सेवन नगरौं ।
हुन त कतिपयलाई खेतीपातीमा रुची लाग्दैन । कतिलाई समय हुँदैन । कतिले यसलाई समयको व’र्वाद ठान्छन् । तर, तपाईंको सानो करेसाबारी छ, सानो बगैंचा छ, सानो बार्दली छ, सानो छत छ भने त्यहाँ पनि खेती गर्न सकिन्छ । यसले हामीलाई अग्र्यानिक खानेकुराको अभाव मात्र पुरा गरिदिदैन । शरीरलाई सक्रिय र जाँगरिलो पनि बनाइदिन्छ ।
अहिले तपाईंलाई यस्तो काम गर्ने जाँगर छैन, फुर्सद छैन, रुची छैन । त्यसो हो भने, भोलि तपाईंले अस्पतालमा बसेर यो भन्दा बढी समय गुजार्नुपर्नेछ । यो भन्दा बढी दुःख र क’ष्ट झेल्नुपर्नेछ । त्यसैले भोलिका संभावित अप्ठ्यारालाई सम्झेर आज नै जीवनशैली परिवर्तन गर्नु उत्तम हुनेछ ।
No Comments on नयाँ वर्षमा अमिताभ बच्चन आफ्नी नातिनी आराध्यसंग मिलेर यस्तो सरप्राइज दिँदै
एजेन्सी । २०२० को अन्तिम दिन नयाँ वर्षको स्वागतका लागि तैयारीमा छन् । तर बलिउडका बादशाह अमिताभ बच्चन विश्वास गर्छन् कि यो अर्को दिन हो, अर्को वर्ष हो र यसमा कुनै ठूलो कुरा छैन। उनी उनी छोरा अभिषेक बच्चन, बुहारी ऐश्वर्या राई बच्चन र नातिनी आराध्या बच्चनसँग स्टुडियोमा संगीत बनाउँदै गरेको देखिन्छन्।
यसवाट उनी नयाँ वर्षम केही नयाँ काम गर्दैछन् भनने देखिन्छ । उनले आफ्नो ट्विटर अकाउन्टमा एक तस्वीर साझा गरेका छन् । जसमा उनको सम्पूर्ण परिवार देखिएका छन् र ऊनी एकदम व्यस्त देखिन्छन् ।
स्टुडियोको तस्विर साझा गर्दै अमिताभ बच्चनले लेखे, भोली बिहान उत्सव सुरु हुँदैछ तर केको लागि, अर्को नयाँ वर्षको लागि केवल एक नयाँ दिन, यो ठूलो कुरा हो तर परिवारसँगै संगीत बनाउनु झनै राम्रो कुरा हो । चित्रमा हामी देख्न सक्छौं कि आराध्या हजुरबुवा अमिताभ बच्चनको छेउमा बसिरहेकी छिन् र माइकको पछाडि अभिषेक बच्चन उभिएका छन् । आफ्नो फोनमा सबै तस्बिर लिँदै देन्छिन् । त्यहि समयमा ऐश्वर्या राई बच्चन कुर्सीमा बसिरहेको देखिन्छिन्।
अमिताभ बच्चनले आफ्नो इन्स्टाग्राममा एउटा तस्वीर पनि साझेदारी गरेका छन् जसमा उनकी नातिनी आराध्या र बिग बी पनि देखिन्छन्। चित्रमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि दुबैले महामारीलाई ध्यानमा राख्दै मास्क लगाएका छन्।
फोटोमा, जब बिग बीले विजयको संकेत देखाए, आराध्या हेडफोन लगाएको देखिन्छिन्। उनको तस्वीर पनि स्टुडियो भित्र छ। तस्वीर साझेदारी गर्दा, उनले लेखे, नातिनी र दादाले माइकको अगाडि स्टुडियोमा संगीत सिर्जना गर्दै।
बिग बीले आफ्नो प्रोजेक्टको बारेमा धेरै जानकारी दिएका छैनन्। तर तिनीहरू फ्यानहरूलाई उत्प्रेरित गरेको देखिन्छ।
No Comments on देशको एउटा नौजवान युवा जस्को उदेक लाग्दो छ कथा अनि बसाई मसानघाटमा, भन्छन्,‘सीप छ जाँगर पनि छ तर काम छैन’ (भिडियोसहित)
मनोहरा खोलाको छेऊमा मरेका मानिसहरुलाई गाड्ने च्यान घारी छ । त्यही च्यान घारीको बीचमा बस्दै आई रहेका ती पुरुष हुन् अर्जुन लामा । अर्जुन बसेको ठाउँमा रातदिन निरन्तर सुस्ताउँदै बगिरहने मनोहरा खोला बगिरहेको छ । थाहा छैन उनी पनि कुन दिन त्यही खोलामा सधैंकालागी बग्ने छन् । तर अहिले उनी त्यही खोलाको रखवाला गरेजस्तो गरी बसी रहेका छन् । वर्षले जम्मा २७ लागेका अर्जुन भन्छन्,‘पैसा भएको हुनाले म यो ठाउँमा बसेको हुँ ।’
No Comments on नेपालका चर्चित बिदेशी बुहारीहरु, कसरी नेपालका छोराहरुको प्रेममा परे ? नेपाली फरर बोल्दै यसरी सुनाए प्रेम काहानी……(भिडियोसहित)
आज विहिबार कुन भगवानको पुजा गर्ने ? यस्तो छ भगवान शिव र विष्णुको रोचक कथा…
No Comments on आज विहिबार कुन भगवानको पुजा गर्ने ? यस्तो छ भगवान शिव र विष्णुको रोचक कथा…
एजेन्सी: हिन्दू धर्मका अनुसार सृष्ठी कर्ता ब्रह्मा, पालन कर्ता विष्णु, र संहार कर्ता शिव एकै रूपका तिन अंग हुन् । भगवान विष्णुको वास स्थान लोकहरूको उत्तम लोक वैकुण्ठ लोक हो । भने भगवान विष्णुकी अर्धागिनी धनकी देवी लक्ष्मी हुन् । हिन्दू धर्मका अनुसार भगवान विष्णुका रूप नाम अनंत छन् । तर पृथ्वीमा जन्म लिएको आधारमा विश्णुका २४ वटा अवतार मानिन्छन् ।
ति मध्य दस मुख्य अवतार र बाँकीका सहायक अवतारको बर्णन गरिएको पाइन्छ । विष्णु भगवान र उनका अवतारहरूको पुजा गरिने दिन आज विहिबार हो । पुजाको सामग्रीमा दूध र घ्यू समावेश गर्नु पर्दछ । व्रत बस्नेहरूले एकछाक दूग्धपदार्थ खानुपर्दछ । अधिकांश व्रतालुहरूले यस दिन श्रीमद्भागवत पुराण पनि पाठ गर्दछन् ।
विष्णुको नृसिंह अवतार र क्रोध
यसै सन्दर्भमा हिन्दु धर्मका ग्रन्थहरूमा एउटा रोचक कथाप्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ, जसमा विष्णुले झण्डै संसारलाई ध्वस्त बनाइदिएका थिए ।
विष्णुभक्त प्रह्लादका पीता राजा ‘हिरण्यकश्यपू’ अति दुष्ट थिए । उनले धर्मको नियमलाई उल्लङ्घन गरेर संसारलाई आफ्नो वशमा पार्न खोजेका थिए । प्रह्लादले आफ्नै पीतालाई अधर्मको बाटो नहिँड्नुहोस् नत्र विनाशले लखेट्नेछ भन्दा हिरण्यकश्यपूले उल्टो सबै देवहरूको अपमान गरी आफ्नो मर्यादा भन्दा बाहिर पाइला टेक्ने प्रयन्त गर्न थाले ।
उनको यस्तो अधर्मी व्यवहार देखेर स्वयं विष्णु भगवान नै नृसिंह अवतार लिएर राजा हिरण्यकश्यपूको दरबारमा उत्पन्न भए र उसको वध गरे । नृसिंह अवतार विष्णु भगवानको चौथो अवतार हो, जसको टाउको सिंहको र शरीर भीषण मानिसको थियो ।
तर हिरण्यकश्यपूको वध गरेर पनि नृसिंहको क्रोध शान्त हुन सकेन । अथाह शक्तिलाई नियन्त्रण गर्न नसकी विष्णु भगवान आफ्नै अवतारमा विलीन हुन गए र यो संसारलाई नै आफ्नो क्रोधको सिकार बनाउन खोजे । विष्णु भक्त प्रह्लादको प्रार्थना र भक्तिले पनि नृसिंह अवतारलाई शान्त बनाउन सकेन । तब तीनै लोक विष्णु भगवानको यस्तो क्रोध देखि भयभीत भएर भगवान शिवको प्रार्थना गर्न लागे ।
शिव भगवानले सुरुमा आफ्ना प्रमुख सेना ‘भैरव’ र ‘वीरभद्र’लाई पठाए। तर नृसिंह एकदमै शक्तिशाली थियो, उसको शक्तिको अगाडि कसैको तागत चल्थेन। वीरभद्रलाई नृसिंहले मार्नै लाग्दा भगवान शिवले आफ्नो परमशक्तिको अवतार लिएर त्यहाँ प्रकट भए, जसलाई ‘सर्वेश्वर अवतार’ भनिन्छ।
भगवान शिवको यो ‘सर्वेश्वर अवतार’ अझसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली अवतार मानिन्छ, जसको अगाडि स्वयं महाकाली अवतारको पनि डिग चल्थेन । फरक यत्ति हो कि, महाकाली अवतारलाई शिवले नियन्त्रण गर्न सक्थेनन् ।
पुराणहरूमा उल्लेख गरिएअनुसार, शिवको सर्वेश्वर अवतारका सहस्त्र भुजा (१००० हात) थिए, सिंहको टाउको थियो र सहस्त्र कोष लामो जटा (कपाल) थियो । अष्टपद (८ वटा खुट्टा) र अष्टपङ्ख (८ पँखेटा) धारण गरेको शिवजीको एक पाइलामा पृथ्वीको आधा भाग ध्वस्त हुने शक्ति थियो ।
भगवान विष्णुको नृसिंह अवतार र शिवको सर्वेश्वर अवतारको अब घमासान युद्ध चल्न थाल्यो, तीनै लोक कम्पायन हुन थाल्यो । यी दुवै परमशक्तिको टक्करको कम्प दुई ब्रह्माण्ड ठोक्किएको कम्प भन्दा चर्को हुन थाल्यो । अन्त्यमा सर्वेश्वर अवतारले आफ्नो अष्टपद र सहस्त्र भुजाले नृसिंहलाई समातेर पँखेटाको सहारा लिई तीनैलोकबाट पर अर्कै ब्रह्माण्डमा लगेर पछारिदिए, जसको कारण नृसिंह अवतार बेहोस् भए । यहि मौका छोपी सर्वेश्वरले नृसिंहको टाउको काटेर विष्णुलाई त्यहाँबाट बाहिर निकालेर वैकुण्ठमा पठाइदिए ।
रणवीर र आलियाको विवाहका लागि जयपुर पुगे दुई परिवार, आलियाले दीपिका र रणवीर सिंहलाई पनि बोलाइन्
No Comments on रणवीर र आलियाको विवाहका लागि जयपुर पुगे दुई परिवार, आलियाले दीपिका र रणवीर सिंहलाई पनि बोलाइन्
एजेन्सी । बलिउडका कपुर र भट्ट परिवार जाडो छल्न जयपुर र रणथंभर सेरोफेरोको इलाकामा पुगेका छन् । रणवीर कपुर र आलिया भट्टको परिवार अहिले रणथंभरस्थित एउटा रिसोर्टमा बसिरहेको छ । रणवीर र आलिया केही वर्ष देखि सम्बन्धमा छन् । अघिल्लो वर्ष अभिनेता तथा रणवीरका वुवा ऋषी कपुरको निधनका कारण उनीहरुको विवाह रोकियो भने अहिले कोरोना जोखिमका कारण विवाह हुन सकेको छैन ।
तर अब विवाहको तयारी सुरु गरिएको छ । बलिउड स्रोतका अनुसार रणवीर कपुर र आलिया भाटको बिहे छिनोफानो गर्न दुई परिवार त्यहाँ पुगेका हुन् । रणविरको साथमा आलिया पनि विमानस्थलमा देखिएकी थिइन् ।
उनीहरु निजि जेटमा त्यहाँ पुगेका छन् । अहिले भने उनीहरुको बिहेको सम्भावना बलियो छ । आलियाका काकाले चाहिं बिहेबारे अहिले नै यकिनका साथ केही भन्न नसकिने बताए पनि बिहे निश्चित भएमात्र आफूले सबै कुरा मिडियालाई बताउने जनाए ।
स्रोतका अनुसार रणवीर र आलियाको बिहेलाई यतिबेला करण जोहरले गोप्यरुपमा व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । आलियाले आफ्नो जीवनको यो महत्वपूर्ण क्षणको साक्षी बस्न रणवीर सिंह र दीपिका पादुकोणलाई रिसोर्टमा बोलाएकी छन् । उनीहरु पनि रिसोर्टमा पुगिसकेका छन् । रणवीर कपुर दीपिकाका पूर्व प्रेमी हुन् ।
सोही रिसोर्टमा आफ्नो टीम लिएर करण पनि पुग्दैछन् । केही दिनदेखि नै धर्मा प्रोडक्सनको टीम रणथंभर र जयपुरमै बसिरहेका थिए । उनीहरु सबै बिहेको तयारीमा जुटेका छन् । यसबारेमा नीतू कपुर, आलिया भाट, सोनी राजदान र रणवीरले केही बोलेका छैनन् ।